Madaxweyne Guuleed oo ka hadlay Heshiiskii Imaaraadka iyo Arimo kale oo Xasaasi ah +Sawirro +Video | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Madaxweyne Guuleed oo ka hadlay Heshiiskii Imaaraadka iyo Arimo kale oo Xasaasi ah +Sawirro +Video
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Mudane C/kariin X. Guuleed ayaa shalay dib ugu laabtay magaalada Cadaado oo ah xarunta KMG ah ee Dawlad Goboleedka Galmudug , waxaana safarkiisa ku wehleyay, Taliyaha ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Sareeye Guud. Bashiir Goobe, Xeer ilaaliyaha qaranka, Mudane: Maxamed Cali daahir, wasiirka Howlaha Guud iyo dib u dhiska Galmudug, Mudane: Maxamed Guure, iyo qaar ka mid ah xildhibaannadii hore heer Federaal.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa oo ay garoonka ku soo dhaweeyeen madaxweyne Ku xigeenkiisa,Maxamed Xaashi , xildhibaanno iyo wasiirro ka tirsan Galmudug ayaa la hadlay wabaahinta , una sheegay in uu ka yimid safar shaqo oo uu ku tagay dalka isu tagga carabta, halkaas oo uu kula kulmay , Maaxweynaha Puntland, heshiis xabad joojineedna ay ku kala saxeexdeen.
Madaxweynuha ayaa tibaaxay in guddi laba geesood ah loo xilsaaray dhaqan galinta heeshiiska hor dhaca ah ee ay isga iyo C/wali Gaas ku wada saxiideen magaalada Abuu dabey ee dalka Imaaraadka, wuxuuna ugu baaqay shacabka reer Galmudug in ay adkeeyaan nabadgalyada iyo xasiloonida, gaar ahaan waqtigan xasaasiga ah ee lugu howlanyahay doorashooyinka dadban ee waddanka oo idil ka socda.
Sidoo kale Madaxweynugu wuxuu tilmaamay in howlihii doorashooyinka ay si habsami ah uga socdaan Galmudug, uuna rajeynayo in maalmha soo socda la soo gabagabeeyo uruurinta iyo diinwaan galinta ergada, si loogu gudbo wajigii labaad ee doorashada, kaas oo ah codbixinta.
Madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii ka digay abaaro ba’an oo ku soo fool leh deegaannada Galmudug ay ka taliso, maadaama ay soo daaheen roobabkii xillga Deyrta. Madaxweynaha ayaa ka codsaday dadweynaha Galmudug in ay u diyaargaroobaan saameeynta ay yeelankaraan abaarahaas, islamarahaantaana ka codsaday Dowladda Dhexe iyo Beesha Caalmkaba ay kaalmo la garab istaagaan dadka tabaaleysan ee dhibaatadu ka soo gaartay roobabka soo daahay awgood.